50 Cent kudare nokuti kusauka akati kuti haana anazvo BitCoins - Tray News - Blockchain News
On Friday, Kukadzi 23, vokuAmerica rapper kudare kushanda pamwe Bankruptcy Court of Connecticut, achizviti “kumbobvira anazvo kana ane bitcoin nhoroondo uye zvavo bitcoin.” wo, ari rapper anoti haana kushandisa bitcoin kuti nemisha mumapoka ake.
Pakapera January, TMZ yakashuma kuti 50 Cent aibhadhara muripo mu BitCoins kuti Album raro 2014, “Animal Chinzvimbo” uye ndakawana 700 BitCoins, iyo panguva iyoyo yaiva pfuurei $ 400,000, uye ikozvino mari iyi bitcoin mamiriro yakawedzera kusvika 20 nguva. Bhuku rambotaurwa kuti mari “rakaramba kwemakore akawanda”.
The rapper, mukudzosa, pavakatambudzwa nhau, achisimbisa nhaka crypto mari, uye akanyora Instagram yake: “Not zvakaipa mwana kubva kumaodzanyemba, Ndinodada pachangu.”
Mukupindura rimwe mhinduro, Iye akati vakakanganwa kuti ane BitCoins. Pari zvino, this post rakabviswa kubva rapper nhoroondo. mune 50 Cent nyaya pasi zita chairo, Curtis Jackson anoti bitcoin kwema aivagamuchira murevereri kambani uye vakanga pakarepo kuchinjirwa US madhora.
The Data the rapper wacho BitPay nhoroondo inopiwa kune dare unoratidza kuti yaipedzerwa vachibhadhara kugamuchirwa mune BitCoins akanga yekudyidzana zvishoma pane zvakataurwa TMZ uye akanga 6 kana 7 BitCoins.
In iri kudare kunyoresa, ari rapper anoti haana kuramba TMZ ruzivo kuti atambudzwe Fans: “Nepo nyaya pachaunga hazvirevi yekudyidzana inokuvadza mufananidzo wangu kana muchiso, Ini kazhinji havaoni kukosha kuramba pachena chero mashoko,” vakati rapper achitsanangura mashoko ake kuna Instagram: “Ndakanyora munzanga nevezvenhau kuti I” vakakanganwa nezvazvo, “nekuti ini zvechokwadi kumbokanganwa kuti ndaiva mumwe vaiimba kutanga kugamuchira paIndaneti muripo mu BitCoins.”
Previous Post:Bill Gates anoti Bitcoin haiwanzowaniki Tech kuti akakonzera nzufu zvakananga nenzira
Next Post:Kushanda LitePay haana kutora nzvimbo musi
Instagram Likes anoti:
Kubvumbi 18, 2018 pa 1:33 AM
Kubvumbi 29, 2018 pa 3:21 PM
Chikumi 2, 2018 pa 10:13 PM
Chikumi 3, 2018 pa 9:17 PM
Chikumi 4, 2018 pa 6:38 AM